Eleven Media CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် သို့ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးရဲ့ အိပ် မ ပါ ပဲ ပေး တဲ့ စာ | The FNG
Eleven Media CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် သို့ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးရဲ့ အိပ် မ ပါ ပဲ ပေး တဲ့ စာ
January 4, 2014 · by 21 South News	· in OP / ED.	·
ရွှေကလောင်ရှင်သတင်းစာဆရာကြီးတယောက်ကို ဒီလောက်ထိ ရှင်းပြနေရတာကြီး
ကျတော့လဲ တယ်တော့ နိပ်ဘူးဗျ ၊ ဒီလောက်တောင် အကောင်းစား တွေလုပ်ဆောင်
လာခဲ့ပြီးတော့မှဗျာ …. ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲလို့ ပဲ ပြောရအောင်ကျပြန်တော့လည်း
ပေကပ်ပြီး ဇွတ် ဆက်ငြင်းနေပြန် သေးတာလေ ၊ လူပဲဗျာ- တချိန်တခါမှာ တကြိမ်တ
ခါလောက်မှားတာပဲ – စာတကြောင်းလောက် ပြောလိုက်ရုံနဲ့တင်ပြီးတာပါ၊ ပေကပ်ပြီး
ဆက်ငြင်းနေတာကြီး ကျမှသာ တောက်လျှောက် ဆက်တိုက် ဖါ မဆုံးတော့ပဲ န ဝ တ
တဖြစ်လဲလို ရှေ့မတက်ပဲ ငုတ်တုပ် မတ်တပ် လဲရတော့မှာ ၊
ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်အနုပညာ အကြောင်းကို ကျွန်တော့လောက်
သိစရာမလိုသလို ၊ ကျွန်တော် ဒါရိုက်တာမိုက်တီးအနေနဲ့ကလည်း သတင်းစာဆရာ
တယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေ စည်းကမ်းတွေကို ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်လောက်
သိစရာအကြောင်းကို မရှိဘူးလေ ၊ အဲဒီကျွန်တော့်ရဲ့မသိမှူ့ ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်မှူ့အတွက်
သတင်းမီဒီယာတခုမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို မှားမှားမှန်မှန် လက်လွတ်စပါယ်
ရေးလို့ ပြောလို့ ရသလို ၊ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် ကျ ခုန ကျွန်တော်ပြောသလို
ကိုသန်းထွဋ်အောင်က သမ္မတ အကြောင်းမသိတဲ့သူလေ၊ သမ္မတလည်းမလုပ်မဲ့ သမ္မတလည်းမဖြစ်နိုင်မဲ့သူ ၊ အဲဒီတော့ –
ပြီးတော့လဲ နောက်ထပ်တခုက ဆရာလည်းသိတဲ့အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီး သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင် လို့သာ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာတောင် ပုဒ်မတွေနဲ့ နဘန်းသတ်နေရတုန်း မဟုတ်လား၊ နောက်- ကဲ ရပါပြီတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာကကော ချောချောမောမော မှန်မှန်ကန်ကန် အောင်ပွဲခံနိုင်ကြမယ်.. လို့ ဆရာ(ဒေါက်တာ) အာမခံနိုင်လို့လား ၊
ဒါဆို အဲဒီလောက်မှ မသေချာတဲ့ ဒီသမ္မတ သာဖြစ်ရင် ဆိုတဲ့ အမေး အဖြေ ကြီးက အဓိပ္ပါယ်မဲ့ကြီးဖြစ်မနေဘူးလား ၊
ကဲ အခု ဒေါ်စု က ပြောလိုက်ပါပြီတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်လောလောလတ်လတ် အကောင်အထည်ဖေါ်ပြလို့ရမဲ့အကျိုးအမြတ်က ဘာတွေရလာမှာမိုလို့လဲ ၊ မဲဆွယ်ရုံအတွက် သက်သက်လောက်အပြင် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နစ်နာသွားသူတွေရဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေကလည်း ဘယ်အတိုင်းအတာထိအောင်ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်လာဖို့ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေအုံးမလဲ မသိနိုင်ပြန်ဘူးလေ ၊
ဘယ်ဘက်ကတွက်တွက် ဘာအကျိုးမှမထွက်တဲ့အပြင် အကျိုးပျက်ဖို့ကိုတောင်
ထည့်တွက်နေရမဲ့ ဒီအဖြေအတွက် ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းစရာမလိုလောက်တော့ဘူး
အားတော့နာပါတယ်ဗျာ ၊ ဒါပေမဲ့သြဇာကြီးလှတဲ့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Eleven Media ရဲ့ ၊
အမြဲတမ်းဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်လေ့ရှိတဲ့ အကို့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်အပေါ်
နားလည်မှူ့လွဲမှားသံသယတွေဝင်သွားနိုင်မဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်များ ခံစားသွားရစေနိုင်ခြင်းငှာ –
နောင် ဆရာ့ အပေါ် သမိုင်းတရားခံမဖြစ်ရစေရန်နှင့် – ……. နောက် …..
ဒီ တယောက်အပြင် –
မည်သည့်ပါတီဝင်မှလည်းမဟုတ်ပါ ၊ နိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ပါ ၊ ရုပ်ရှင်ပဲရိုက်တတ်
သည့် မိုက်တီး သာဖြစ်ပါသည် ။
← ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ နှစ် ဦး ကို ပြန်လည် ဖမ်းဆီး
ဂန္တ၀င် ဘောလုံး သမား ယူဆီဘို ရဲ့ဈာပန ကို ပေါ်တူဂီ မှာ ကျင်းပ →
2 responses to “Eleven Media CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် သို့ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးရဲ့ အိပ် မ ပါ ပဲ ပေး တဲ့ စာ”
Pingback: MyanmarLatestNews » Eleven Media CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် သို့ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးရဲ့ အိပ် မ ပါ ပဲ ပေး တဲ့ စာ·
kill_the_devil January 4, 2014 at 6:43 pm · ·
11 Media ,
agree with mike tee.
stupid question & very stupid comment.
myit sone project ? Who screwed up ? who is still screwing up?
same persons & same people(thugs,thieves & crooks).
Why don’t you ask than shwe(this cunning shit is still alive)/thein sein & all his alias ,thugs,thieves & crooks?why they screwed up ?
Why they hold it? Why they plan to pass this shitty shit to next government?
You are part of those thugs,thieves & crooks.